कफी र चिया पिएपछि किन फ्रेश भइन्छ ? कफीका यी अपत्यारिला फाइदा - अनलाइन डिजिटल समाचार : Shreepage TV
कफी र चिया पिएपछि किन फ्रेश भइन्छ ? कफीका यी अपत्यारिला फाइदा
काठमाडाैं : दैनिक एक कप ब्ल्याक कफीले हार्ट फेलको खतरा १२ प्रतिशतसम्म घटाउँछ । २१ हजार मानिसहरु भएको अनुसन्धानपछि यो आँकडा जारी गरिएको हो । अनुसन्धानका अनुसार कफीमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरमा हुने इन्फ्लेमेसन अथवा शरीर सुन्निने समस्या कम गर्छ, त्यसैले भविष्यमा हृदयघात हुने खतरा घट्ने गर्छ ।
चिया र कफीमा पाइन् क्याफिनको सीधा असर दिमागमा पर्छ । यसले दिमागसँग जोडिएको त्यो न्यूरोट्रान्समिटरलाई ब्लक गरिदिन्छ जसले तपाईं थाक्नुभएको जानकारी दिन्छ । त्यसैले तपाईं फ्रेश महसुस गर्नुहुन्छ ।
राति सुत्नुअघि मनतातो दूध खाँदा फाइदै फाइदा
घ्यूले शरीरको तौल कम गर्न मद्दत गर्छ
मद्यपानको लत र उपचार